संसारकै महँगा मोबाइल, मूल्य सुन्दा होस् नै उड्ने ! - Ujyalo Khabar
अहिलेको समयमा धेरै महँगा मोबाइल फोनहरु बजारमा आइरहेको बेलामा विश्वकै महँगो फोनाहरुको लिस्ट सार्बजनिक भएको छ । मानिसहरु धेरै महँगो मोबाइल आफ्नो सौखको लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय मोबाइल व्यक्तित्वमा निखार ल्याने वस्तुको रुपमा पनि लिन थालिएको छ ।
सुप्रीम गोल्डस्त्रिकर आईफोन ३न् : यस फोनमा २७१ ग्राम सुन प्रयोग भएको छ भने विभिन्न ५१ हिरा जडित समेत गरिएको छ। यसको होम बटनमा पनि हिरा प्रयोग गरिएको छ। यस मोबाइलको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा ३२ लाख अमेरिकन डलर पर्ने गर्छ।
Previous अक्षय कुमारका ‘जुम्ल्याहा भाइ’ वर्षौ पछी भेटिए कश्मीरमा !
Next मान्छे उड्यो आकाशमा : मान्छे उडेर नै ५६० किलोमिटर पार ..